Saturday July 17, 2021 - 12:22:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli uu sii xoogeystay dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya ayaa lagusoo waramayaa in colaadu ay ku faaftay gobol ka baxsan aagga dagaalka.
Markii ugu horraysay ayay dagaallo culus ka bilaawdeen gobolka Amhara ee ay degto qowmiyadda Amxaarada, ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalyahanno daacad u ah jabhadda TPLF ay weerar arbushaad ah ku qaadeen tuulooyin dhaca galbeedka Itoobiya iyagoo waxyeello gaarsiiyay guryo iyo dhulbeereedyo ay leeyihiin dadka amxaarada ah.
ismaamulka gobolka Amhara ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu kumanaan ciidamo dheeraad ah uu udiray galbeedka gobolka Tigray si ay halkaas ugu celiyaan dagaalyahanada Tigray ee usoo ruqaansada dhanka galbeedka Itoobiya.
Afhayeenka ismaamulka Amhara ayaa usheegay wakaaladaha wararka in TPLF ay weeraro arbushaad ah kusoo qaadday gobolkooda islamarkaana ay si adag isaga caabin doonaan.
Wasaradda difaacad xukuumadda Addis Ababa waxay sheegtay in ciidan dhan 100,000 oo askari ay ku xoojin doonto ciidamada Federaaliga ah ee ku sugan galbeedka Tigray, ciidamadan dheeraad ah ayaa badankooda ka imaanaya ismaamul goboleedyada sida ay wararku sheegayaan.
Dhinaca kale hay'adda warbaahinta Itoobiya ayaa sheegtay in ay joojisay dhowr warbaahin oo ay ku eedaysay in ay jebiyeen anshaxa faafinta sida ay hadalka udhigtay.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay hay'adda warbaahinta shaqada laga joojiyay ayaa aad u buun buuniyay guulaha kooxda TPLF ay gaareen iyagoona duray natiijadii kasoo baxday doorashadii baarlamaaniga ah.
Dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa sababay in dowladaha reergalbeedka ay hakiyaan lacago malaayiin dollar ah oo ay xukuumadda Addis Ababa kusiin jireen ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Abiy Axmed oo markale ku goodiyay in ay iska difaacayaan Jabhadda TPLF eed culusna jeediyay.
TPLF oo dib ula wareegay magaalooyin hor leh iyo Addis iyo Moscow oo iskaashi melleteri yeelanaya.